2 24V DC မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ဗဟိုတံခါးပေါက်သော့ခတ်စနစ်အားပိတ်ဆို့ထားသော 24V DC ယာဉ်အတွက် Siren မပါဘဲတံခါးပေါက်သော့ခတ်သော့ခတ်သောသော့ ၀ င်ခြင်းစနစ်။ – Professional ကအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံ|ကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထောက်ပံ့
2 24V DC မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ဗဟိုတံခါးပေါက်သော့ခတ်စနစ်အားပိတ်ဆို့ထားသော 24V DC ယာဉ်အတွက် Siren မပါဘဲတံခါးပေါက်သော့ခတ်သော့ခတ်သောသော့ ၀ င်ခြင်းစနစ်။
ကား Air ကိုချို
12v မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို USB Charger
ကားကို Anti-ညစ်ပတ် Pad
Blower မော်တာ Resistor Regulator
ပျင်းရိ AIR ထိန်းချုပ်ရေးအဆို့ရှင်
နေစွမ်းအင် Car Air Purifier ကားရေမွှေး Air Cleaner Spin Car Air Freshener and Odor Eliminator စီးကရက်မီးခိုးအနံ့များကိုဖယ်ရှားပါ
Car Fan Double Head အတွင်းပိုင်းအအေးခံစွမ်းအားကြီးမားသောလေအားလျှပ်စစ်ကားပန်ကာ 12 / 24V
12၃.၅ LED V Tachometer gauge Kit″ Shift Light နှင့်ကားပါကင်မီတာ + RPM နင်းခြင်း
12/24လျှပ်စစ်စနစ်၏ V ကိုကား Air လေချို
TP620 Car TPMS ကြိုးမဲ့တာယာစနစ်စီးကရက်ပေါ့ပါးပါဝါနှိုးစက်စနစ်များနှင့်အတူ4ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပအာရုံခံကိရိယာ
ကားခိုးယူမှုဆန့်ကျင်မှုစနစ်ဆိုသည်မှာကားကိုယ်နှိုက် (သို့) ကားပေါ်မှပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းမှတားဆီးသည့်စနစ်တစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်. ၎င်းတွင်အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုပါဝင်သည်, အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှု circuitry, နှိုးစက်များနှင့် actuators.
အပို gps module တစ်ခု output ကိုဆိပ်ကမ်းရှိသေး၏.
1.သော့ခတ်: ဝေးလံခေါင်သီသော့ခတ်ခလုတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ, ယာဉ်ရပ်နားအလင်းတစ်ချိန်က flash လိမ့်မယ်, ဥ once တစ်ချိန်ကအသံ, အလိုအလျောက်ဗဟိုတံခါးသော့ခတ်. (siren option ကို)
2.သော့ခတ်: အဝေးထိန်း၏သော့ဖွင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ယာဉ်ရပ်နားအလင်းနှစ်ကြိမ် flash ပါလိမ့်မယ်,ဥ twice နှစ်ကြိမ်အသံ, ဗဟိုတံခါးကိုအလိုအလျောက်သော့ဖွင့်;
3.ကားရှာပါ: ဥကိုနှိပ်ပါ / အသံတိတ် / တစ်ချိန်ကဝေးလံသော၏စည်ခလုတ်ကို, ယာဉ်ရပ်နားအလင်း 15s flash ပါလိမ့်မယ်, အဆိုပါဥ sounds အသံ, တူညီတဲ့ခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်ပြီးရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်;
5.ကုတ်လေ့လာမှု: System သည်တစ်ချိန်တည်းတွင် 2remotes ရှိသည်, တစ်ချိန်ကသင်ယူမှုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ယာဉ်ရပ်နားအလင်းတောက်ပစောင့်ရှောက်လော့, ထို့နောက်မည်သည့်ခလုတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, သင်ယူမှုအောင်မြင်ရန်အတည်ပြုရန်နှစ်ကြိမ်ကားပါကင်အလင်းကို flash;
6.ကုဒ်ဖျက်ခြင်း: 5s များအတွက်မြှောင် switch ကိုနှိပ်ပါ, အောင်မြင်မှုကိုဖျက်ရန်အတည်ပြုရန်နှစ်ကြိမ်ကားပါကင်အလင်းကို flash.
7.Aux အနုတ်လက္ခဏာ output ကိုသို့မဟုတ်စည်လွှတ်ပေးရန် : အခါအဘို့အစာနယ်ဇင်းသော့ဖွင့်3ဒုတိယစည်လွှတ်ပေးရန်။(အဆိုပါကားတစ်စီးကိုတစ် ဦး မော်တာ / actuator ထည့်သွင်းလိုအပ်ပါတယ်)
Car electrician နှင့်အတူ Profesionales မှတပ်ဆင်ထားသောထုတ်ကုန်လိုအပ်သည်
အဘယ်သူမျှမအလယ်ပိုင်းတံခါးကိုသော့ခတ်ရှိသည်မဟုတ်သော 24V DC ကားများအတွက်
နှင့်အတူပစ္စည်း2ဗဟိုတံခါးကိုသော့ခတ်၏ actuators
1x ကိုဝါယာကြိုး Set
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု:
1.shippment မတိုင်မီထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးပါ, ကုန်ပစ္စည်းသည်သင်၏ဒေသစျေးကွက်အတွက်သင့်တော်မှုရှိ၊ မရှိနှင့်သင့်အားအတည်ပြုပါ.
2.ဒါကနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်, နှင့်အကောက်ခွန်ပါဝငျသညျ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, အချိန်နှင့်ဒါ, သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သောစိတ်ထားဖြင့်အာမခံပေးပါမည်.
3.လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့အဘို့အထုပ်ပိုးသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်များကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်, သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ပါ, ဒါပေါ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူလည်းကောင်းလှ၏.
သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, မင်းကိုပိုပြီးဂုဏ်ပြုတယ်လို့မင်းကိုခံစားစေတယ် ...
ISO9001 လွန်:2008 အရည်အသွေးစနစ်က authentication ကိုနှင့် ROHS authentication ကို.
ငါတို့မှာအင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်,ရုရှား,ပေါ်တူဂီလက်စွဲစာအုပ်,ငါတို့မှာ google download link ရှိတယ်
ငါတို့မှာအင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်,youtube မှပေါ်တူဂီတပ်ဆင်ဗီဒီယို ,ရှာဖွေရန် cardot
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖိလစ်ပိုင်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံအမျိုးမျိုး၌တပ်ဆင်ခြင်းစခန်းများစွာရှိသည်,ပီရူး,ဒိုမီနီကာ ,ဘရာဇီး,စင်္ကာပူ ,ဆော်ဒီအာရေဗျ ,ထိုင်းနိုင်ငံ,ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်မသိပါက,သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ရရန်လွတ်လပ်စွာငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ ,တပ်ဆင်ခသည်,သင်သူတို့နှင့်ညှိနှိုင်း
စိတ်မပူပါနဲ့, စက်ရုံသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အော်တိုအပိုပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်. ကုန်ပစ္စည်းများကိုမူရင်းကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်သည်. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို OEM နံပါတ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံကိုပြောပြပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်မီးပွားများဖြစ်သည်, လောင်စာဆီ injectors, စက်နှိုးကွိုင်, အောက်စီဂျင်အာရုံခံကိရိယာ, ကားချိုများ, အလင်းအိမ်, အာရုံခံကိရိယာ, ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ
1.T / T. 2.Paypal. 3. ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, အလီပေးချေမှုအားလုံးငါတို့အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်.
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်အားလုံးတွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုချမှတ်ခဲ့သည် - ကုန်ကြမ်းများ, ဖြစ်စဉ်ကိုပစ္စည်းများအတွက်, အတည်ပြုသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ပြီးပစ္စည်းများ, ချောကုန်ပစ္စည်းများ, စသည်တို့. အပြင်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်အားလုံးတွင်ပစ္စည်းအားလုံး၏စစ်ဆေးမှုနှင့်စစ်ဆေးမှုအခြေအနေကိုဖော်ထုတ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်ထားသည်.
ထုတ်ကုန်အများစုမှာ 100 အပိုင်းပိုင်း. ကုန်ပစ္စည်းစတော့ရှယ်ယာ၌တည်လျှင်မူကား. မဆိုအရေအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်.
DACIA Duster အတွက်စတီယာရင်ကော်လံပြောင်း 255406898R
အဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်နှစ်ဆပေါ့သောကား C6 သည်အဝေးနှင့်အနီးရှိအရောင်နှစ်မျိုးပါသောကားရှေ့မီးများကို LED
2019 အသစ်သော Head-up Display Universal HUD မော်တော်ယာဉ်သိုလှောင်စက် Display M8
4.3″ LCD ကားကြေးမုံမှိန်ခြင်း Monitor Reverse Parking နောက်ဘက်ကင်မရာကွင်းခတ် Car Recorder
အခန်း 529, မဟုတ်ဘူး. 1112, ကွမ်ကျိုးရိပ်သာလမ်းမြောက်, Tianhe ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်